Atemmufo 13 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
Ɔbɔfo bi kɔɔ Manoa ne ne yere nkyɛn (1-23)
Wɔwoo Samson (24, 25)
13 Na Israelfo no san yɛɛ bɔne wɔ Yehowa ani so bio,+ na Yehowa de wɔn hyɛɛ Filistifo+ nsa mfe 40. 2 Saa bere no, na ɔbarima bi wɔ Sora+ a ofi Dan abusuakuw+ mu, na na ne din de Manoa.+ Ná ne yere yɛ obonin* a onni ba.+ 3 Da bi, Yehowa bɔfo baa ɔbea no nkyɛn bɛka kyerɛɛ no sɛ: “Hwɛ, woyɛ obonin, na wunni ba. Nanso wubenyinsɛn na woawo ɔbabarima.+ 4 Mmom hwɛ na woannom bobesa anaa nsã a ɛbow biara,+ na nni biribiara a ɛho ntew.+ 5 Hwɛ! Wubenyinsɛn na woawo ɔbabarima, na ɛnsɛ sɛ oyi ne ti,*+ efisɛ sɛ wonya wo abofra no* pɛ, ɔbɛyɛ Nasirini ama Onyankopɔn. Na ɔno na obedi anim agye Israel afi Filistifo nsam.”+ 6 Ɛnna ɔbea no kɔka kyerɛɛ ne kunu sɛ: “Nokware Nyankopɔn no nipa bi baa me nkyɛn. Wohwɛ no a, ɔte sɛ nokware Nyankopɔn no bɔfo, na ne ho yɛ hu paa. Mammisa no baabi a ofi, na ɔno nso ammɔ ne din ankyerɛ me.+ 7 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: ‘Hwɛ! Wubenyinsɛn na woawo ɔbabarima. Mmom hwɛ na woannom bobesa anaa nsã a ɛbow biara, na nni biribiara a ɛho ntew, efisɛ sɛ wonya wo abofra no* pɛ, ɔbɛyɛ Nasirini ama Onyankopɔn akosi da a obewu.’” 8 Ɛnna Manoa bɔɔ Yehowa mpae sɛ: “Yehowa, mepa wo kyɛw. Mesrɛ wo, ma nokware Nyankopɔn no nipa a wosomaa no seesei ara no nsan mmra, na ɔmmɛkyerɛ yɛn nea yɛnyɛ abofra a yɛbɛwo no no.” 9 Na nokware Nyankopɔn no tiee Manoa, na nokware Nyankopɔn no bɔfo no san baa ɔbea no nkyɛn bio. Saa bere no, na ɔbea no te baabi wɔ wuram, na na ne kunu Manoa nni ne nkyɛn. 10 Na ɔbea no yɛɛ ntɛm tuu mmirika kɔka kyerɛɛ ne kunu sɛ: “Hwɛ! Ɔbarima a ɔbaa me nkyɛn nnaano no asan aba bio!”+ 11 Ɛnna Manoa sɔree, na ɔne ne yere kɔe. Na ɔkɔɔ ɔbarima no nkyɛn kobisaa no sɛ: “Wone ɔbarima a wo ne me yere kasae no?” Na ɔkae sɛ: “Yiw, ɛyɛ me.” 12 Ɛnna Manoa kae sɛ: “Nea woaka no, ɛmmra mu! Abofra no bɛbɔ ne bra dɛn, na adwuma bɛn na ɔbɛyɛ?”+ 13 Na Yehowa bɔfo no ka kyerɛɛ Manoa sɛ: “Biribiara a maka akyerɛ wo yere sɛ ɔntwe ne ho mfi ho no, onni so.+ 14 Ɛnsɛ sɛ odi biribiara a efi bobe mu. Ɛnsɛ sɛ ɔnom bobesa anaa nsã a ɛbow biara,+ na ɛnsɛ sɛ odi biribiara a ɛho ntew.+ Nea maka akyerɛ no nyinaa, ma onni so.” 15 Afei Manoa ka kyerɛɛ Yehowa bɔfo no sɛ: “Yɛpa wo kyɛw, twɛn ma yɛmpɛ apɔnkye ba bi nyɛ aduan mma wo.”+ 16 Nanso Yehowa bɔfo no ka kyerɛɛ Manoa sɛ: “Sɛ metwɛn mpo a, merenni w’aduan no. Nanso sɛ wopɛ sɛ wobɔ ɔhyew afɔre ma Yehowa a, wubetumi abɔ.” Ná Manoa nnim sɛ ɔyɛ Yehowa bɔfo. 17 Afei Manoa bisaa Yehowa bɔfo no sɛ: “Wo din de dɛn,+ na sɛ nea woaka yi ba mu a, yɛahyɛ wo anuonyam?” 18 Na Yehowa bɔfo no ka kyerɛɛ no sɛ: “Adɛn nti na wopɛ sɛ wuhu me din? Me din yɛ nwonwa.” 19 Enti Manoa faa apɔnkye ba no ne aduan a ɔde rekɔbɔ afɔre no, na ɔde bɔɔ afɔre wɔ ɔbotan no so maa Yehowa. Na Ɔyɛɛ* anwonwade; ɔreyɛ nyinaa, na Manoa ne ne yere rehwɛ. 20 Bere a ogyaframa fi afɔremuka no so rekɔ soro no, Yehowa bɔfo no faa ogyaframa no mu kɔɔ soro. Saa bere no nyinaa na Manoa ne ne yere rehwɛ nea ɛrekɔ so no. Ɛhɔ ara na wɔde wɔn anim butubutuw fam. 21 Yehowa bɔfo no ansan amma Manoa ne ne yere nkyɛn bio. Ɛnna Manoa hui sɛ ɔbarima no yɛ Yehowa bɔfo.+ 22 Na Manoa ka kyerɛɛ ne yere sɛ: “Owu na yebewu, efisɛ Onyankopɔn na yɛde yɛn ani ahu no yi.”+ 23 Nanso ne yere ka kyerɛɛ no sɛ: “Sɛ Yehowa pɛ sɛ okum yɛn a, anka ɔrennye ɔhyew afɔre+ ne aduan afɔre mfi yɛn nsam, anka ɔremma yenhu eyinom nyinaa, na anka ɔrenka eyinom mu biara nso nkyerɛ yɛn.” 24 Akyiri yi, ɔbea no woo ɔbabarima na ɔtoo no din Samson.+ Bere a abofra no renyin no, Yehowa kɔɔ so hyiraa no. 25 Bere bi akyi no, Yehowa honhom fii ase pusuw no.+ Saa bere no, na ɔwɔ Mahane-Dan+ wɔ Sora ne Estaol+ ntam.
^ Anaa “ɔbea a ɔnwo.”
^ Nt., “sɛ abofra no pue fi awotwaa mu.”